aishworya – Page9– best nepali site
टोफिचु जुनियर च्याम्पियन्स कप हुँदै
६ असार, काठमाडौं । अन्तर विद्यालय फुटसल टुर्नामेन्ट टोफिचु जुनियर च्याम्पियन्स कपको दोश्रो दिनका खेलहरु चार वटै खेल मैदानमा भए । बानेश्वर फुटसल मा १४ वर्ष मुनिका खेलाडी समूह मध्ये समूह ए बाट एक्मे र ओलम्पिया अग्र पंक्रिमा रह्यो भने इपिएस समूह बीको समूह बिजेता बन्यो । रोज बड ले रनरअप बन्दै क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश निश्चित
६ असार, काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार फवार्ड नेइमार खुट्टाको चोट फेरि बल्भिmएको छ, जसका कारण उनले अभ्यास गर्न सकेनन् । मंगलबार अभ्यासका क्रममा पुरानै चोट बल्झिएपछि नेइमार फिजियोथेरापिस्टसँग गएका छन् । उनी त्यहाँबाट छिट्टै अभ्यासमा फर्कन टिमको विश्वास छ । Source : Onlinekhabar
८ असार, काठमाडौं । पहिलो खेलमा स्वीट्जरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएको विश्वकप दाबेदार मानिएको ब्राजिलले शुक्रबार कोस्टारिकालाई खेलको अतिरिक्त समयमा गोल हानेर जितेको छ । ब्राजिलका लागि ९१ औं मिनेटमा कोउटिन्हो र ९७ औं मिनेटमा नेइमारले गोल गरेका हु्न् । Sorce: Onlinekhabar
७ असार, काठमाडौं । पनामा पेपर्स-२ मा अर्जेन्टिनी फुटबलर लिओनल मेस्सीको नाम पनि परेको छ । खोज-पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समूह कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआईजे)ले अवैध धन लुकाउनेहरुको विवरण समेटिएको पनामा पेपर्स-२ सार्वजनिक गरेको छ । Source : Onlinekhabar
काठमाडौं । मध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत चैतमा भएको परीक्षाको नजिता सार्वजनिक गरेको हो । परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ५१ हजार ५३२ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । उनीहरू मध्ये ‘ए’ प्लस ग्रेड (स्तरीकृत अंक) प्राप्त गर्ने १४ हजार २३४, ‘ए’ प्राप्त गर्ने ४६ हजार १३०, ‘बी’
माइतीघर मण्डलामा डा. केसीको आक्रोशः नेता नै माफिया रहेछन्
९ असार, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले नेता र माफियाखुसी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । जनता र विद्यार्थीमुखी ऐन आउनु पर्ने भन्दै उनले नभए आफ्ना कुरा कसरी सुनाउनुपर्छ भन्ने जानेको बताए । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तत्काल ल्याउन र माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय खारेज गर्न
सर्वियालाई हराएपछि स्विजरल्याण्डको अघिल्लो यात्रा सहज
९ असार । सर्वियाविरुद्ध जित निकालेपछि स्विजरल्याण्डलाई अघिल्लो चरणको यात्रा सहज भएको छ । समूह ईको शनिबार बिहान सम्पन्न खेलमा स्विजरल्याण्डले सर्वियालाई २–१ ले हरायो । स्विजरल्याण्डको जितमा शाकरीको गोल निर्णायक भयो । शाकरीले ९० मिनेटमा गोल गरेर टिमलाई जित दिलाए Source: Onlinekhabar
नाइजेरियाका विश्वकप हिरोले पाए नयाँ नाम- ‘लिओनल मुसा’
काठमाडौं । आइसल्याण्डविरुद्ध दुई गोल गर्दै नाइजेरियालाई विश्वकपमा जित दिलाएपछि अहमद मुसाले अर्जेन्टिनामा नयाँ नाम पाएका छन्-लिओनल मुसा । तर, नाइजेरियाका विश्वकप हिरो मुसाले अर्जेन्टिनाविरुद्ध गोल गर्न गाह्रो नरहेको भन्दै समूह चरणबाट बाहिरिनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । रुस विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिने खतराका बाबजुद अर्जेन्टिनी समर्थकलाई अझै लिओनल मेस्सीमाथि भरोसा छ । र, मेस्सी
स्विडेनविरुद्ध जर्मनीको कठिन जित, टोमी क्रुस बने नायक
१० असार, काठमाडौं । विश्वकप २०१८ को दावेदार जर्मनीले स्विडेनविरुद्ध कठिन जित दर्ता गरेको छ । जर्मनीको जीतको नायक टोमी क्रुस बने । अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा टोमीले फ्रिकिकबाट गोल गरेका थिए । Source:Onlinekhabar